China Glass fitahirizana Jar miaraka amin'ny orinasa Cork sy mpamatsy | Tsara ery
Delivery T ime :
30 andro eo ho eo aorian'ny santionany sy baiko voamarina (tsy tafiditra amin'ny vokatra fanodinana na filaharana manokana)
Vita vita amin'ny vera borosilika avo, mora diovina ary mavesatra be, fanoherana ny fanapahana sy ny dingana avo, izay tena malamalama.Crystal mazava dia tsy adoka adsorb, mora diovina.
Mihazona ny hamandoana sy ny hamandoana ny tavy voaroy voaporofo ary mitahiry ny rivotra ao anaty atiny sy maina.
Mifanentana amin'ny fitahirizana sy fitehirizana ny karazan-tsakafo isan-karazany ao anatin'izany ny fihahian-tsakafo, famonosana, sakamalaho, vary, siramamy, lafarinina, dite, kafe, ahitra, zava-manitra, biscuits, sns.
Mety ho fanomezana tsara indrindra ho an'ny tanjonao indrindra izany.
Fanomezana ho tian'ny olona ho tonga lafatra amin'ny fetibe sy fankalazana toy ny Halloween, Krismasy, Fisaorana, sns.
Ny takelaka fitahirizana mazava dia lava tsara ho an'ny fampiasana maharitra, dia hamonjy toerana ao anaty vata fampangatsianao.
Milina fanasan-damba, fa nanasa tanana ny fanasana tanana.
Momba ny fanamafisana Cork Lid
Ny fonon-boriky haingony-porofo, mora misoroka hamandoana, voadona ny tànana, mafy orina, avo be.
Ny fanoherana ny hantsana dia tsy mora miova ary na ny fahasalamana sy ny ekolojia tany am-boalohany.
Manaraka: Mametaka kitapo fitehirizana Pantry mametaka miaraka amin'i Dome Lid
300ML Kodiarana fitaratra fohy amin'ny alàlan'ny Cork Stopper
Ny tavoahangy tavoahangy farany ambony miaraka amin'ny Pajanina vy
Jarina fitehirizana ny alàlan'ny alàlan'ny kianja ...
Ranomaso fitotoana be dia be
Jar-baravarankely fitahirizan-tsakafo miaraka amin'ny Fantsom-borona
Saribao fitotoana fitaratra miaraka amin'ny lakana roa-roa